Iqela loHlelo ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
Ubomi beByte yiwebhusayithi ye-Intanethi ye-AB. Kule webhusayithi siyazisa malunga neyona nto iphambili iindaba, izifundo kunye namaqhinga malunga nehlabathi letekhnoloji, imidlalo kunye neekhompyuter. Ukuba ungumthandi weteknoloji, ukuba igazi lihamba ngemithambo yakho iteksi emva koko iVidabytes.com yile nto uyifunayo.
Ekubeni iqaliswe kwi-2008, i-VidaBytes ayiyekanga ukukhula imihla ngemihla de ibe yenye yeewebhusayithi eziphambili kwicandelo.
Iqela lokuhlela leVidaBytes lenziwe liqela le iingcali zetekhnoloji. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Intengiso kunye nomyili wegraphic. Kuqeqesho oluqhubekayo kwimiba yokucwangcisa. Ukufunda yonke into ejikeleze ilizwe letekhnoloji kubalulekile namhlanje.
Ukuqala kwam ukubamba ikhompyuter ndandineminyaka eyi-18. Ngaphambi kokuba ndingakhange ndiwasebenzise ukudlala kodwa ukusukela ngoko ndiye ndakwazi ukucinga kwaye ndafunda isayensi yekhompyuter njengomsebenzisi. Kuyinyani ukuba ndaqhekeza ezimbalwa, kodwa oko kwandenza ndaphelelwa luloyiko lokuzama nokufunda ikhowudi, inkqubo kunye nezinye izihloko ezibalulekileyo namhlanje.
Iprofayili yeqela lokubhala ngokubanzi leVidaBytes.
Uhlaziyo namhlanje yayiyiwebhusayithi ezinikele kwihlabathi lesoftware kunye neenkqubo ezijoyine iVidaBytes kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwaye ngoku yonke imixholo idityaniswe kule webhusayithi.
Umfundi osebenza ngekhompyutha. Umfundi weComputer Systems onomdla wokunceda wonke umntu afunde ngetekhnoloji inyathelo ngenyathelo.
I-Redesenred yayiyiwebhusayithi yakudala malunga neeNethiwekhi kunye neeKhompyutha okwangoku ziyinxalenye yeVidabytes.com